Apple TV +၊ Invasion၊ Apple ၏သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်စီးရီးအသစ် | အိုင်ဖုန်းသတင်း
Apple TV +, Invasion, Apple ၏သိပ္ပံဝတ္ထုစီးရီးအသစ်တွင်ရနိုင်သည်
Ignatius ခန်းမ | 22/10/2021 14:00 | Apple TV
streaming ဗီဒီယိုပလပ်ဖောင်းအများစုကဲ့သို့ပင် Apple TV + တွင်စီးရီးအသစ်များနှင့် / သို့မဟုတ်အပိုင်းများကိုပြသရန် Apple သည် Fridays ကိုအခွင့်ကောင်းယူသည်။ ဒီတစ်ပတ်က စီးရီးရဲ့အလှည့်ပါ။ ကျူးကျော်စိတ်ကူးယဉ် သိပ္ပံ ဇာတ်လမ်းတွဲ တစ်ခုပါ။ ဘတ်ဂျက် သန်း ၂၀၀ ခန့်၊ မတူညီသောသတင်းရင်းမြစ်များအရ။
ကျူးကျော် ၎င်းသည်သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်သည် HG Wells ၏ ဂန္တဝင်ဇာတ်လမ်းကို အခြေခံထားသည်။, War of the Worlds . စီးရီးသည် တိုက်ကြီး5မှ မတူညီသော လူများနှင့် မိသားစုများနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် ပြင်ပဂြိုဟ်များ၏ ခြိမ်းခြောက်မှုကို မည်ကဲ့သို့ ရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်သည်ကို ပြသထားသည်။
ကျူးကျော်ကြယ်များ ဆမ်နေးလ် (Jurassic ပန်းခြံ, စန္ဒယား, ရေနံချောင်း) Golshifteh Farhani (Pirates of the Caribbean - Salazar's Revenge, အလိမ်အညာကွန်ရက်, ထွက်မြောက်ရာဘုရားများနှင့် ဘုရင်များ) Shiori Kutsuna (Deadpool 2, ပင်လယ်မှာရာဇဝတ်ကောင်, ပြင်ပ), Shamier Andersonဒဏ်ရာရတဲ့ အမျိုးသမီးကို ဖျက်စီးတယ်။, ဘာလင်၏သူရဲကောင်း) နှင့် Firas Nasser (Fauda)
Sam neill သူသည် အငြိမ်းစားယူတော့မည့် ရဲမှူးတစ်ဦးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားသည်။
Golshifteh Farahani ခင်ပွန်းသည်အတွက် သူမ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို စတေးခဲ့သော စိတ်ပျက်နေသော မိခင်တစ်ဦးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားသည်။
Shiori Kutsana အာကာသသို့ ခရီးသွားရန် အာကာသနည်းပညာအဖြစ် ရွေးချယ်ထားသည်။
Shamier anderson သဲကန္တာရထဲတွင် ဤဂြိုလ်သားသတ္တဝါတစ်ကောင်ကို တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြင့် ဇာတ်လမ်းတွဲကို စတင်သည့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ စစ်သားတစ်ဦးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားသည်။
ပထမဆုံး အပိုင်း3ခု ရပါပြီ။
Apple ကတီဗီ + အပတ်စဉ် သောကြာနေ့တိုင်း ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်ကို ပြသပါမည်။. Invasion ၏ ပထမအပိုင်းသုံးပိုင်းကို ယခုအခါ ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် ရနိုင်ပါသည်။ စီးရီးမပြီးမချင်း ကျန်အပိုင်းများကို အောက်ပါရက်များတွင် ပြသပါမည်။
ကျူးကျော်မှုအပိုင်း 4- အောက်တိုဘာ 29၊ 2021
ကျူးကျော်မှုအပိုင်း ၅ ။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်
ကျူးကျော်မှုအပိုင်း 9- ဒီဇင်ဘာ 3၊ 2021
ကျူးကျော်မှုအပိုင်း 10- ဒီဇင်ဘာ 10၊ 2021
သီအိုရီအရ၊ Invasion သည် ဂြိုလ်သားများမှ ကမ္ဘာမြေကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းအကြောင်းကို ပြောပြသည့် ဇာတ်လမ်းတိုတစ်ခုဖြစ်သည်။ လောလောဆယ်မှာတော့ အောင်မြင်မှုပေါ်မူတည်ပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိ မသိရပါဘူး။ ဒုတိယရာသီရှိနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » Apple TV » Apple TV +, Invasion, Apple ၏သိပ္ပံဝတ္ထုစီးရီးအသစ်တွင်ရနိုင်သည်
Bloomberg ၏အဆိုအရအစိတ်အပိုင်းများရှားပါးမှုသည် Apple အတွက်စံချိန်တစ်ခုဟုယူဆရသည့်လေးပုံတစ်ပုံကိုပျက်စီးစေလိမ့်မည်
iPhone 13 ရှိ Apple Shot ဗီဒီယိုအသစ်။ စမ်းသပ်မှု VI- Movie Magic